सुत्केरी हुँदा बच्चासँगै जे निस्कियो : डाक्टरको गयो सातो, बोलाए प्रहरीलाई – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/सुत्केरी हुँदा बच्चासँगै जे निस्कियो : डाक्टरको गयो सातो, बोलाए प्रहरीलाई
एजेन्सी । भारतको बिहारको हाजिपुरमा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ एक गर्भवती महिलाले बच्चालाई जन्म दिइन् तर जब महिलाले बच्चा जन्माइन् तब डाक्टरको होस उड्यो । महिलाको पेटबाट बच्चासहित ब न्दु क को गो’ली पनि निस्कियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
घरमा झैझगडा भई रहन्छ ? यस्तो बास्तो दोस हुन सक्छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ बास्तु दोस
कतै झाडु त बनी रहेको छैन तपाईको गरीबीको कारण ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा